Kugadzira Runyorwa rweMailing Yekutengesa Email | Martech Zone
Kugadzira Runyorwa rweMailing Yekutengesa Email
Chitatu, Kukadzi 13, 2019 Chitatu, Kukadzi 13, 2019 Pauline Farris
Hapana mubvunzo kuti kushambadzira neemail kunogona kuve imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekusvika kune vangangove vatengi. Iine avhareji ROI ye3800 muzana. Kune zvakare kusahadzika kushoma kuti iyi fomu yekutengesa ine matambudziko ayo. Mabhizinesi anofanirwa kutanga akwezva vanyoreri vane mukana wekushandurwa. Zvino, pane basa rekuparadzanisa nekuronga avo vanonyoresa zvinyorwa. Chekupedzisira, kuitira kuti izvo zviitwe zvakakosha, email email mishandirapamwe inofanirwa kugadzirirwa kunongedza vanhu nezvakanaka zvemukati panguva chaiyo.
Unogona kunyatso sangana nematambudziko aya, nekugadzira nekugadzirisa zvinyorwa zveemail, uye wozvishandisa pakunakira mishandirapamwe yako. Pazasi, isu tichaenda pamusoro akasiyana matekinoroji anoshandiswa kuunganidza, kusimbisa, uye kuronga tsamba yekutumira. Tichakurukurawo nezve basa re opt-ins. Mushure meizvozvo, tichaenda pamusoro pemaitiro echikamu chechikamu, uye tiende pamusoro matipi ekugadzira email uye tsamba yezvinyorwa zvinotyaira shanduko.
Kushambadzira Email Technologies
Iwe hausvike kure zvakanyanya mukuedza kwako kutora uye kubata ako emaimeri zvinyorwa usati waona kuti yakajairwa email mhinduro iwe yauri kushandisa kwezuva nezuva kutaurirana chaizvo haina kukodzera kushambadzira kweemail. Iwe unonyatsoda mhinduro yakatsaurwa yekuunganidzwa kweemail, simbiso, chidimbu, uye kubata opt-ins. Neraki, iwe une akati wandei sarudzo dzaunogona kuwana kwauri.
Ngatitangei nezvimwe zvishandiso zvekukwezva vanyoreri. Iwe unogona kuwedzera kune yako email zvinyorwa zvinyorwa kubva kune akasiyana masosi, uchishandisa akawanda maitiro. Iwe unogona kuwedzera mafomu ekunyorera emaimeri kune yako webhusaiti, gadzira mapeji ekumisikidza nechinangwa chekuunganidza email kero, kunyengedza vanyoreri nemakwikwi kana zvakakosha zvipo, kunyange kuunganidza maemail pazviitiko. Aya angori mashoma sarudzo. Izvi zvinoshandiswa zvinogona kukubatsira iwe kuti uwane vanonyoresa vanofarira.
Buda chinangwa popups anokupa iwe wekupedzisira mukana wekutora email yekuonana ruzivo. Aya pop-ups anoonekwa sevatengi vari kubuda yako webhusaiti kana mapeji ekumhara, uye kukurudzira vatengi kuti vafambe zvishoma kumberi pasi peiyo faneni nekusainira kune yako email runyorwa. Iyi ndiyo imwe nzira yakanaka kune vanhu vanogona kunge vasingade kushandura izvozvi, asi vachiri kufarira.
Listagram chishandiso chinonyanya kubata chechinangwa ichi. Ichi chishandiso chinogonesa maitiro ekuunganidza masaini nekushandisa 'vhiri'. Panzvimbo pekungokumbira email kero panguva yekupedzisira, iwe unogadzira yakasarudzika vhiri revashanyi kutenderera kuti uwane dhisikaundi, yemahara chigadzirwa, kana chimwe chipo. Mukudzosa kwekutora mubairo wavo, vanokupa email kero.
Sign up Kwese
Misangano, misangano, uye zvimwe zviitiko zvinokupa iwe mukana wakanaka wekusvikira kune vangangove vatengi. Mushure mezvose, ivo vakaratidza kanenge kufarira tangential mauri nekuratidzira kumusoro. Nehurombo, dzimwe dzenzira dzakajairika dzinoshandiswa kuunganidza ruzivo rwekuonana idiki pane dzakaringana. Unogona kuseta clipboard uchikumbira kusaina kumusoro, asi izvo zvinorema. Iwe uchafanirwa kunyora zvese izvo gare gare. Kugadzira nzvimbo yekushandira uye kupinda mune yekunyorera ruzivo iwe pachako zvakare kunoshungurudza, uye zvinokuchengetedza iwe kuita mune 'misoro pasi' basa kana iwe uchifanira kunge uchitaura kumusoro bhizinesi rako. Ikozve kune nyaya yekuwanzo kuve nemavara eInternet kubatana anoita kunge anotambudza zviitiko izvi.
funga Sign up Kwese pachinzvimbo. Ichi chishandiso chinokutendera iwe kumisikidza mafomu eemail, uye nekuashambadzira iwo pamahwendefa, nharembozha, uye malaptop. Ivo vanoshanda ne kana vasina Wi-Fi, uye vanogona kuunzwa kunze kana iwe uchidzokera kuhofisi. Ingo gadzira fomu rako, riwedzere kune mashoma mashoma ekushandisa zvishandiso uye vasiye kwaunowanzo siya clipboard kana notepad. Vanopinda vanogona kusiya ruzivo rwavo rwekuonana, uye iwe unogona kuiisa muzvinyorwa zvako gare gare.
Izvi ndizvo Facebook kushambadzira yakagadzirirwa chaizvo kuti ikubatsire kutora ruzivo rwevatengi. Panzvimbo pekuisa manyore neruzivo, vatengi vanoshuvira kusangana vanongobaya kushambadza, uye facebook inounza fomu nefoni yekufonerwa kubva kuprofile yavo yatove munzvimbo.
Nekudaro iwe unotora maemail adhiresi, danho rinotevera nderekuachengeta uye kuagawa nenzira dzinobatsira mukushambadzira kwako. Kana yako email zvinyorwa zviri mumazana, kana kunyange zviuru hazvisi chimwe chinhu chaunoda kubata nemaoko. Panzvimbo iyoyo, rega tekinoroji ibatsire, uye tarisa mukugadzira chidimbu chehurongwa hunoshanda kwauri. Zvimwe zvikamu zvakajairika zveemail zvinosanganisira:
New Signups - Yekugamuchira maemail uye kekutanga vatengi kupihwa.
Zvinodiwa nevatengi uye Zvaunofarira - Batanidza vanyoreri vane zvemukati zvine chekuita nezvavanoda zvavanofarira uye zvavanofarira.
Tenga Nhoroondo - Curate email zvemukati zvinoenderana nezvinhu izvo vatengi vakambotenga.
Ngoro Dzokutenga Dzakasiiwa - Tumira zvakakosha uye zviyeuchidzo kune vatengi vakasiya nzira yekutora kare.
Tungamira Magnetti - Simply segment vatengi kuitira kuti iwe ugone kunongedzera ivo nemaemail akavakirwa pane inotungamira magineti yakavatungamira kunyoresa pakutanga.
Heano mamwe maturusi anogona kubatsira:
Ichi chinhu chakakurumbira email mushandirapamwe chishandiso chinokutendera iwe kuendesa email kero kubva kwakasiyana masosi. Ipapo, iwe unogona kuronga izvi zvinoenderana nezvikamu. Gare gare, kana iwe ukagadzira email kushambadzira mishandirapamwe, unogona kushandisa Nguva Dzese Yekubatana yekuparadzanisa maturusi kunyatso tarisa kune chaipo vateereri nhengo.
Mailchimp ibasa rakazara, email kushambadzira mushandirapamwe. Iyo inofanirwa kuve inozivikanwa, uye inokodzera kukosheswa. Pano, isu tichatarisa chishandiso chikamu chidimbu.
Mailchimp inokutendera iwe kuti unyore manyore ekunyorera ruzivo, kana kuunza kunze. Sezvo iwe paunowedzera vanyori, iwe uri kukwanisa kuwedzera ma tag ayo anoramba akabatana neumwe neumwe mutengi. Iwe unogona ipapo kugadzirisa aya emaimeri zvinyorwa kuburikidza nechikamu. Paunogadzira mushandirapamwe, unogona kuwedzera kana kugadzira chidimbu chauchazoshandisa kunongedza vatengi chaivo. Apa ndipo pane ma tag anobatsira futi, sezvo aya anogona kushandiswa sezvikamu zvakare.
Kwete chete izvo zvinokuitira iwe kunongedzera vanhu vane email zvemukati izvo zvisingafarire, GDPR uye mimwe mirau zvinoreva kuti iwe unogona kunge uri mumvura inopisa kana ukashandisa ruzivo rwevatengi rwekuonana neimwe nzira yavasina kukupa kuratidza mvumo. Asi izvo, maturusi mazhinji akanyorwa pamusoro ane maitiro panzvimbo yekuona kuti vanyoreri vakasarudzwa nemazvo. Kuwana mvumo dzakakodzera kwakakosha, uye nzira yako yekupinda inofanirwa kunge isinganetsi. Heano mamwe maitiro akanakisa:
Shandisa zvakapetwa-mukati kuona kuti uri kungonongedza vanhu vanofarira zvechokwadi.
Dzivisa kusarudza vanhu mukati pachako.
Ipa sarudzo yekuzvinyora iri nyore kuwana uye kushandisa.
Shandisa Captcha kudzivirira bot signups
Dzokorora zvinyatso kunyoreswa nevanyori paunotumira email yekusimbisa
Nyora Chikamu Chikamu Maitiro
Kugadzira email zvikamu izvo zvinonyatso kuwana mhedzisiro ibasa rakaoma. Nekudaro, iwe paunenge uchiona zvibereko zveaya kuyedza, zvinova pachena kuti kukudziridza rakasimba runyorwa chidimbu chidimbu zano rakakodzera iyo nguva nezviwanikwa zvaunodyara.
Cory Neal, COO we Izwi rePfungwa
Imwe yematambudziko ekuparadzanisa maemail ari kuunganidza ruzivo iwe rwaunoda. Kuti uwane kunyorera, imwe yemaitiro anonyanya kushanda ndeyekuda kuti vatengi vape huwandu hushoma hwemashoko. Izvo zvinobatsira kuwedzera mareti ekubhadhara, asi zvinogona kukusiira iwe neruzivo diki kwazvo kuti ushandise kunanga zvinangwa. Hedzino nzira dzinoverengeka dzaunogona kuwedzera huwandu hwedata rauinaro kune vako vanyori.
Unganidza ruzivo kuburikidza neongororo, bvunzo, uye mibvunzo.
Shandisa email yekubatanidza metric kuti uone isingashande, isingashande, uye vanonyoresa zvakanyanya kunyorera.
Unganidza ruzivo rwekunyorera kune zvakatengwa kare
Unganidza data rekutsigira vatengi pamwe neemail kunyorera ruzivo
Nhanho inotevera kutsanangura zvikamu zvaunoda kushandisa, uye kuona kuti ndevapi vanyori vekuisa muchikamu chimwe nechimwe. Takataura akati wandei pamusoro. Kune zvakare nzvimbo yezvikamu, data rehuwandu, iyo indasitiri yavanoshanda mairi, uye zvavanofarira. Iwe unogona zvakare chikamu zvichienderana neshanduko mune yevatengi maitiro. Pane sarudzo dzakawanda kuti mufunge.
Kugadzira Email uye Tsamba Yemukati Inoshandura
Kuti email yako yekushambadzira ibudirire, iwe unofanirwa kunanga vateereri vako nezvakakosha zvinoenderana navo, unovaendesa kumberi pasi peiyo faneli, uye nekuvaka pfungwa yekuvimba neyako brand. Kugovanisa zvinyorwa zvako kuti ugone kunongedza maemail ako zvinobudirira inongova nhanho yekutanga. Heano zvimwe zvinhu zvekufunga nezvazvo.
Shandisa Dynamic Emails Kuzvigadzirira Zvemukati - Na zvine simba zvemukati, maemail ako ane HTML kodhi inoshandura zvemukati meiyo email zvichienderana neanogamuchira. Neiyi tekinoroji, izvo zvinopihwa, nyaya, uye mafoni ekuti zviitwe mumwe nemumwe anogamuchira anoona zvinoenderana nehunhu hwavo uye maitiro.
Shandisa Misoro uye Misoro Misoro Inopa Kukosha - Kuwana vanhu kuti vapinze muemail yako kunonetsa. Kana ivo vakadzvanya, iwe uchine rimwe basa rekuita. Iwe uchiri kufanira kukurudzira vanogamuchira kuti vatore pamwe nezvako zvemukati uye verenga zvakare. Kuti uite izvi, tengesa nyaya yega yega uchishandisa musoro kana musoro wediki unonyatso kuzivisa bhenefiti yekuenderera mberi. Semuenzaniso, '10 Matipi Ekutarisira Yako DVD Kuunganidzwa 'hainyatso kutaurirana kubatsirwa. '10 Matipi Ekuwedzera Iyo Resale Kukosha Kwako DVD Kuunganidzwa 'kunoita.
Batanidza Kudanwa Kuti Uite Icho Chinodzvinyirira Vaverengi Kuburikidza neiyo Funnel - Kufona kuti zviitwe hakusi kwemapeji ekumhara chete. Kune yega yega yezvinyorwa zvaunogovana, panofanirwa kuve nechimwe chiito chekuti mushandisi atore. Zvemukati mepamusoro fanera, izvi zvinogona kunge zviri kudzvanya kuti uone mamwe mavhidhiyo ekuwedzera kana kuverenga yakakodzera blog post. Kune vatengi vepasi fannel, iyo CTA inogona kuvatungamira kune yekumhara peji kukumbira mutengo mutengo kana yemahara kuyedzwa.
Gadzira uye Curate Yazvino uye Inobatsira Zvemukati - Vanhu vanowanzo shandisa email tsamba tsamba yezvinyorwa zvekusimudzira chete. Uku kukanganisa kukuru sekushandisa bhurogu yako kana mamwe mapuratifomu enhau ekushambadza chete. Hapana munhu anoda kubatana nechiratidzo chinongotaura nezvacho chete. Pane kudaro, dzikamisa chidiki diki chekusimudzira zvemukati nezviri mukati zvinodzidzisa, zvinozivisa, uye zvinofadza. Zvimwe zveizvi zvinogona nezve zvigadzirwa zvako nemasevhisi, semuenzaniso: maitiro ekugutsikana. Iwe unogona zvakare kushandisa maturusi akadai se BuzzSumo kuti uone misoro yenyaya dziri niche yako, kana misoro yemisanganiswa senge AllTop kuziva misoro inopisa inokwezva kune vakawanda vateereri.
Kubudirira kwemisangano yako yeemail kunotsamira pakukwanisa kwako kuunganidza nekutonga data reemail, wozonongedza vateereri vako nezvakakodzera zvemukati. Nekushandisa iwo marongero pano, iwe unogona kwazvo kuona kuti kwako kuyedza kuri kubudirira.
Tags: Constant Contactmailchimp
Pauline anotaura chiPutukezi, Chirungu, Spanish neItari. Akafamba nyika kuti azvinyurire mutsika nyowani uye adzidze mitauro. Nhasi anodada kuve nhengo yekuvhota yeAmerican Translators Association uye anoshingairira kutora chikamu cheMutungamiri weDare rePutukezi Mutauro.
Yakazara Circle Insights: Funnel Metrics uye Attribution ye Salesforce
Moosend: Email Kushambadzira & Zvekushandisa